Qisadii Beerta-xayawaanka Buugii, Animal farm. Ee uu qoray ninkii George Orwell, waxa soo minguuriyay :Ahmed Muuse Ismacil - somalilandlivemedia
21:16 14. October 2017
Markii kacaankii Af-weyne wadanka, xuurtada, bilaa sharciga ah ku qabsaday. Waxa hir galay farta af-soomaaliga. Isla beryahaa, sida taariikhdu xusyso, waxa soo baxay dhowr buug oo caqiibo leh, kuna qoran farta af-soomaliga.
Waxa ka mid ahaa, buug uu qoray, nin ingiriis ah, Goerge Orwell, sanadkii 1945. Magaca uu ku soo baxay, waxa uu ahaa «Animal farm». Afaf aad u badan ayaa lagu turjumay. Umadaha aduunyaduna, midba magac ayey ula baxday buugaa, oo ku salaysan, dbcan dhaqankooda, iyo wacyiga hor yaalay markaa.
Qaar waxay ula baxeen, «xeradii ugaadha», qaar waxa ay ula baxeen, «KALIGII-TALIYE». Waa buug aduunyada oo dhan laga yaqaano. Ardaydana loogu dhigo dugsiyada.
Ahmed Muuse Ismail,Waaa Qoraaga soo maanguuriyey, buugii, Animal farm. Ee uu qoray ninkii George Orwell.
Buugan waxa mamnuucay Maxamed Siyaad Barre. Qofka lagu qabto xadhig dheer ayaa loo diri jiray. Anigoo aad u yar waxan xasuuustaa, inuu buugaasi, gurigayaga, yaalay. Waxa la dhigay, saxaarad, 5 shandadood ka sareeyaan.
Ninkii Jeneral Gaani la odhan jiray ayaa, ayaa, habeen kadis ku bixiyey in dhamaan, guri kasta la baadho. Waa Hargeysa oo dhan. Si kadis ah. Oo dadkuba aanay filayn. Waxan xasuustaa xaafadayadii oo ma qudha, buugaa, sidii loogatakhalusi lahaa falawgeed , ku dhaqaaqday. In badan ayaan, is waydiin jiray.
Markaan waynaaday een soo galay yurub, nasiib wanaag, buugii ayaa waxa u uka mid ahaa casharada (curriculum), maado af-ingiriisi oon qaatay. Markaa wax-baa igu duxay
Maanta, hadaan, buugaa, magac u bixin lahaa, waxaan ugu yeedhi lahaa: «fikradii wasakhaysnayd» sababta?
Buugu wuxuu ka sheekaynayaa, beer xayawaan ka buuxo, oo ku magac dheer Manor’s farm. Ninka leh waxala yidhaa Mr. Jones. Habeen, habeenada ka mida, ayaa, xayawaankii beertu keli isku noqonayaan, markaa, DOOFAAR ku caan baxay, Old major ayaa qudbad qiiro leh, xayawaankii uga jac siinaya; wuxuu odhonayaa………..
Alaaaa, waxaan ku riyooday, dunidan oo la wada simanyahay, xayawaankuna xoriyad buuxda haystaan. Laba-lugoodlahana (dadka) ay ka hoos baxeen. Qalafsanaantiisa iyo sida uu inoola dhaqmo.
Mudo yar ka bacdi, waxa dhimanaya Old major. Laakiin, xayawaankii, oo xasuusan, riyadii, waxa ay ku dhaqaaqayaan kacaan lagu ridayo ninkii beerta haystay, Mr. Jones.
Laba doofaar oo ilko-huruuda-oo-dhaadheer leh , ayaa mashruucan ku guntanaya, waa Snowball iyo Napoleon. Maalin, uu Mr. Jones ilaabay, inuu quudiyo xayawaanka, ayuu inqilaabku dhacayaa. Mr Jones iyo laba-lugoodlihii u shaqaynayey waa laga caydhinayaa beertii. Manor farm waxa loo bixinayaa animal farm.
Axdi qarameedkii afar-lugoodlaha oo ka kooban 7 qodob.
wax kasta oo laba-lugood ku socdaa waa cadow
wax kasta oo ku socda afar lugood ama baalal lehi waa walaalo
xayawaanku ma xidhan karaan maryo
xayawaanku ma seexan karaan sariir
xayawaanku ma cabi karaan khamri
xayawaanku ma dili karaan xayawaan kale
Xayawaanku waa walaalo siman
Si cad ayaa loogu qorayaa, Gidaarka beerta.
Bilawga inqilaabku waa guul-weyn. Xayawaanku si fiican ayey ugu howl galayaan in beerta la fasho, midhahana, si hagar la aana, loo goosto. Jimce kasta marka, fasax la yahay, xayawaanku qorshe iyo siyaasad ayuu shir u galaa. DOOFARADA oo is bidaya in ay ka mudanyihiin, xayawaanka kale, ayaa madax midhaan iska dhigaya.
Si kastaba ha ahaatee, Napoleon, oo madaxnimo iyo hunguri ku waashay, ayaa lo’da ka xadaya caanaha, iyo wa xoogey tufaaxa, si isaga iyo DOOFARADA kale isugu naaxiyaan. Waxa-kale oo ay diyaarinayaan, nidaam lagu qore, DOOFAARO yaryar o ka dhaadhiciya dhigooda, in DOOFAARKU mar kasta, ka iimaan qabo, kana saxsanyahay xayawaanka kale.
Deyrtii xigtay, Mr. Jones iyo Laba-lugoodlihii u shaqayn jiray, waxay damcayaan in ay beertii dib u qabsadaan. Mahadi ha ka gaadhee, xirfadihii Snowball waxa xayawaanku jabinayaan laba-lugoodlihii uu Mr Jones watay. Dagaalkaasina waxa uu la magax baxay «qaswatul-cowshed». Jiilaal ayaa soo galaaya.
Geenyo-shaaximan oo ku magac dheer, Mollie, faras quruxdeedu cajabisay, aadna u jecel quwaaxa iyo macmacaanka. Ayaa waxa sasabanaya laba-lugoodle.
Snowball waxa uu diyaarinyaa qorshe fiican oo loogu dhisayo, beerta xayawaanka, windmill (birta-dheer), si laydh hawada ku shaqeeya loo helo. Xayawaankuna ugu raaxaystaan faa’idada tamarta-laydhka. Macal-asaf waxaa, sii aad u daran uga hor imanaya, Napoleon. Waxa uu ku andacoonayaa, in ay wax soo saarka beerta hoos u dhimayso.
Jimce ayey xayawaanki isugu imanayaan beerta, si cod loogu qaado, mooshinkii laydhka.
Waxa dhacaysa in Napoleon uu soo kaxaysanayo ey khatar ah , Snowball’na la eryado. Qudbad uu ka jeedeyey goobta waxa uu oodhanayaa; DOOD dambe iyo shir ma dhic karo. Fikirka Birta-dheer iyo tamarta laydhkana isaga ayaa lahaa. Laakiin uu ka xaday, budhcadii Snowball. Wax kasta oo ka xumaada xayawaanka, maalintaa ka bacdi waxa uu guudka uga sarayaa, Snowball.
Boxer waa farska ugu xoogan beerta. Ninkii Laba-lugoodle Mr. Jones, dantu waxa ay ku kalifaysaa in uu iska tahriibo.
Napoleon waxa uu bilaabayaa, inuu la baayacmushtaro, laba-lugoodlaha, xataa isaga ogsoon in ay xadgudub ku tahay axdigii-afar-lugoodlaha. Maalin uu roob dabayl-wataa qaaday, birtii dheerayd ee tamrta-laydhka. Naopleon wuxuu dhaliisha saaryaa Snowball. Xayawaankana wuxuu ku amrayaa in dedeg dib loogu dhiso.
Napoleon hamuumtiisi xukunku way sii durkaysaa. Waxay gaadhaysaa heer uu noqdo KALIGII-TALIYE. Xayawaanka masaaakiinta ahna uu ku qasbo, in ay qirtaan, dambi aanay galin, kuwa ka hor yimaadana uu ku salido. Ey, naxariis daran oo qudhooda ku jarta beerta iyo xayawaanka dhexdiisa. Napoleon iyo caruurtiisu waxay bilaabayaan in ay ku seexdaan, sariiro. Xayawaanku waxa ay ka helayaan xoogoodi beerta wax yar. Marba marka kas ii danbeeya, raashinka ay helaan wuu siii yaraanayaa. Halka Doofarada, iyo cilyaalkoodu ay ka cayilayaan, misaankooduna si cad u kordhayo. Marka birtii, dabaysha laydhka ka dhalinaysay dhamaato augost. Napoleon wuxuu lawdh (load) qoryo ah ka iibiniyaa Mr. Jones.
Fredrick oo leh beerta ugu xigta, ayaa isaguna lacag faalso ah kaga iibsanaya beerta alaabo. Waxa kale oo uu qorshaynayaa in uu qarxiyo, birtii laydhka, dabaysha ka dhalinaysay. Waanuu ku guulaysanayaa.
Markaa waxa soo if baxaysa, in 7 qodob ee uu ku tiirsanaa, dastuurka afar-lugoodluhu, in ay Doofaradii, kolba jabiyaan. Una dhaqmaan si baal marsan sharciga.
Dib u eegis in lagu sameeyo, dastuurka ayaa dhacaysa. Waxa soo shaac baxaya, in: In ay doofaradu sakhraamaan, ka dib marka ay isku qulaamiyaan, khamri. Xeerarka Afar-lugoodluhu isku raacayna, waxa bud dhig u ahaa. In aaanay xayawaanku marnaba iyo sinaba, u cabin khamri. Hasa-ahaatee. Doofaaradu waxa ay u janjeedhinayaan, xeerkan: Xayawaanku in ay iska badiyaan maaha khamriga.
Faraskii, Boxer, ee xooga lagu manaystay, ayaa mar kale ku deeqaya, in uu si tabaruc ah dib-ugu dhiso, birtii dabaysha ka dhalinaysay laydhka. Napoleon ayaa faraskii Boxer iib gaynaya. Nasiibdaro, Dabagaale ayaa ku odhanaya xayawaanka, waar faraskii Boxer, Cusbitaalka xayawaanka ayaa la dhigay. Markaa, si kadiso ah, ayuu u dhintay. Nabadgelyo iyo si sharafi ku dheehantayna, naftu way uga baxday. Afar-lugoodle oo dhami si, daacad ah ayuu ku rumaystay dabagaale. Xayawaanoow run sheeg, xayawaanowna run uga qaado.
Laba sano kabacdi, beerti-xayawaanka waa la balaadhinayaa, kadib marka uu Napoleon uu iibsado. Laba beerood oo ku qabsanaa beerta-xayawaanka. Noloshu way ku adkaanaysaa, xayawaanka marka laga reebo Doofaarada, oo iyagu xitaa bilaabaya in ay canjilaan, Laba-lugoodlaha, adoonsiga waxa aan dhaamin ku haystay. Lugaha qaarka danbe (Hind legs) ayey ku soconyaan.
Xeerarkii ka koobnaa 7 xeer, ee xayawaanku isku raacay, waa la naaqusinayaa, tabta faynuuska. Xeer qudha, ayaa lagu soo ururinayaa: All Animals Are Equal But Some Are More Equal Than Others. Macnaheedu waxa uu yahay, XAYAWAANKA OO DHAMI WAY SIMANYIHIIN LAAKIIN QAAR, AYAA MARKASAT ISKA SII XIGA, OO KA FADILAN
Shekaduna, waxa ay ku soo xidhmaysaa, doofarada, oo sharaab la cabaya, ninkii Mr. Jones ee ahaa, Laba-lugoodlaha. Xayawaaanka oo dusha ka eegaya, muuqaalka xafladan, waxa ku adkaanaysa, in ay kala saaraan doofaaaradii, iyo laba-lugoodlihii, xoriyadooda iska indha tiri jiray.
Waxa soo koobay,
Msc Ahmed Muusa Ismail
“Axkaamta Soonka “Casharkii 11 Aad
Xukuumadda Somaliland Oo Ka Haddashay Digniin Dowlad UK Ay Uga Digtey Muwaadiniinyeeda In Ay U Socdaalaan Somaliland Video
Halkan Ka Daawo Gabadh yar oo somali ah oo cod macaan Tartan Quran kaga yaabisay Dadkii dawanayay Wadanka Emaratka Carabta
Gudoomiya Xisbiga Waddani ee USA Maxamed Aaden Tarabi oo Fashilyay Fadeexado Dulhoganaya Xafiiska Washington D.C.
Newer PostHalka Ka Daawo Dooda Saxda Ah Ee Musharixiinta Madaxtinimada Somaliland 17.10.2017
Older Post War weyn:-Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Oo Si Aan Gabasho Lahayn U Muujiyey Inuu Diidan-yahay Shir Qabyaaladeedkii Burco Ku Dhexmaray Madax-dhaqameedka Habar-jeclo Iyo Sacad Muuse